Home | Archer Angels
NOW ENROLLING: Groups, Youth Program, Surveys
सदस्यहरूलाई स्वस्थ लक्ष्यहरूमा पुग्न र जीवनका चुनौतिहरू पार गर्न प्रेरित गर्दै
जनसंख्या हामी सेवा दिन्छौं!
व्यक्ति, परिवार, जोडी, र समूह
TELEHEALTH सेवाहरूको उपयोगको माध्यमबाट, हामी टाढाबाट परामर्श गर्दैछौं!
आपतकालिन बाल हेरचाह
आर्चर एन्जलसले COVID-19 प्रकोपको बेला "अत्यावश्यक श्रमिकहरू" र पहिलो जवाफदाताहरूको बच्चाहरूको लागि आपतकालीन परिवार बाल हेरचाह साइट खोल्दछ।
स्वच्छता केयर किटहरू
आर्चर एन्जिल्सले COVID-१ Pand ग्लोबल महामारीको बीचमा गरीबीको अनुभव गरीरहेका अल्पविकसित सदस्यहरूलाई हाइजीन केयर किट वितरण गर्दछ।
रेफरलहरू र संसाधनहरू आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव गरियो
दूरी परामर्श HIPAA कम्पिलियन्ट Telehealth साथ उपलब्ध छ
सबै मेजर स्वीकार गर्दै
समय <१min मिनेट
भेटघाट अग्रिम बनाइयो
मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरु
अपरेशनको समय :
सोमबार - बिहिबार: १०:०० बिहान - :00:०० बेलुका
शुक्रवार - शनिबार: ११:०० बिहान - २:०० बजे
आर्चर एन्जिल्स परिवार सेवा, LLC एक व्यवहारिक स्वास्थ्य अभ्यास हो जुन बाह्य रोगीहरू, जोडी, परिवार र समूह उपचार प्रदान गर्दछ। हामी असीमित जनसंख्या र यस कार्यालयबाट परामर्श सेवाहरूको खोजी गर्ने सबैलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राख्दछौं।
सिफारिश गरिएको हस्तक्षेपले व्यक्तिगत चिकित्सा, विकास र विकासलाई बढावा दिन्छ जुन अवलोकन योग्यको साथै मापनयोग्य पनि हो। आर्चर एन्जलस सदस्यहरूलाई सकारात्मक परिवर्तनहरू लागू गर्न, जीवन चुनौतिहरू पार गर्न, दिगो प्रगति हासिल गर्न, जो आवश्यकताहरू र लक्ष्यहरूसँग निर्दिष्ट छन् भनेर मार्गदर्शन गर्दछ।
चिकित्सकीय हस्तक्षेप मानसिक, भावनात्मक, र व्यवहार स्वास्थ्य आवश्यकताहरु को उपचार मा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। बिरामीहरूलाई अस्पताल भर्ती, कारागार र जोखिम व्यवहार कम गर्न उपचार गरिन्छ। गुणस्तर समर्थन र स्रोतहरू स्वतन्त्र जीवनयापन, सामाजिक सीप, शैक्षिक प्रगति साथै वित्तीय स्थिरता बढाउन प्रदान गरिएको छ। सकारात्मक जीवनशैलीलाई सहभागीहरूलाई स्वस्थ लक्ष्यहरूमा पुग्न प्रोत्साहित गर्नका साथै जीवनका चुनौतीहरू पार गर्न प्रोत्साहित गर्दछ।
रचनात्मक परिवर्तनलाई उत्प्रेरित गर्न प्रयोग गरिने ढाँचामा समाधान-केन्द्रित थेरापी, शक्ति-आधारित थेरापी, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी, DBT, र क्रोध व्यवस्थापन समावेश छ। प्ले गर्नुहोस्, कला र संगीत उपचार अन्य बीचमा प्रदान गरिने छ।
क्लिनिकल पर्यवेक्षण र परामर्श सेवाहरू चाँडै थपिने छ ...
हाल नैदानिक ​​इंटर्नहरू स्वीकार गर्दै - कृपया इन्क्क्वायरीहरू पठाउनुहोस्: Rbelizaire@ArcherAngels.com
टेलिल्थ र दूरी थेरापी
हामी निम्न बीमा योजनाहरू स्वीकार गर्दछौं
पत्राचार ठेगाना:7337 वाशिंगटन स्ट्रीट # 63१6363१ वेलेस्ली एमए ०२248१
सेवा साइट: Boy०० बॉयलस्टन स्ट्रीट १th औं फ्लो बोस्टन एमए ०२9999।
सेवा साइट: Ar 75 अर्लिtonटन स्ट्रीट, सुइट B०० बोस्टन, एमए ०१११66
फ्याक्स:5855--4२०-6895।
Ar 75 अर्लिtonटन स्ट्रीट, 500००, बोस्टन एमए ०११११6
अब बुक गर्नुहोस्
21 २०२१ आर्चर एन्जिल्स परिवार सेवा, LLC